SAWIRRO: Xiddiga Arsenal Mesut Ozil oo la ogaaday inuu gabar alkuntay iyo faahfaahinta aad uga baahan tahay quruxleyda uu guursan rabo. | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » SAWIRRO: Xiddiga Arsenal Mesut Ozil oo la ogaaday inuu gabar alkuntay iyo faahfaahinta aad uga baahan tahay quruxleyda uu guursan rabo.
SAWIRRO: Xiddiga Arsenal Mesut Ozil oo la ogaaday inuu gabar alkuntay iyo faahfaahinta aad uga baahan tahay quruxleyda uu guursan rabo.
Ugu dambeyn, kubadsameeyaha kooxda Arsenal Mesut Ozil ayaa wuxuu fargalka alkunka u xiray gabadhii hore usoo noqotay Quruxleyda Sannadka dalka Turkey (Miss Turkey) taasoo lagu magacaabo Amine Gulse.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaana daaha ka qaaday in la filayo in labadoodu ay si rasmi ah isku guursadaan xagaagaan.
Labadooda ayaa dhowr jeer lagu arkay goobo kala duwan, xiriirkoodana lama beenin karin
Xiddiga heerka caalami ee dalka Germany kaasoo asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga ayaa wuxuu shukaansanayey quruxleydaan Amine Gulse tan iyo sannadkii 2014kii, waana ku guuleystihii taajka Miss Turkey Winner sannadkii 2015kii. Labadooda ayaana dhowr jeer lagu arkay goobo kala duwan iyagoo wadajir ah, xiriirkoodana bannaanka soo dhigay.
Bishii January 2017kii, 23 sanno jirtaan Amine Gulse, oo atariisho ah modelkana ka shaqeysa, ayaase beenisay inay wax xiriir ah la leedahay xiddiga qadka dhexe ee kooxda Arsenal, inkastoo wadajirkoodu uu xad dhaaf noqday.
Ugu dambeyn Ozil ayaa la ogaaday inuu gabadhaan aliuntay, guursana doono xagaagaan
Hase yeeshee, haatan labadooda ayaa waxaa lagu arkay fargalka alkunka, taasoo wax walba xaqiijineysa, sidoo kale laacibkii hore ee kooxda Real Madrid ayaa 5 milyan oo ginni ku iibsaday daar weyn oo ku taalla caasimadda Istanbul ee dalka Turkiga, taasoo loo fahmay inuu u iibiyey Amine Gulse si xagaagaan ay halkaas ugu aqal galaan.